DEG-DEG: Shirka Maamul Sameynta Shabeellaha Dhexe & Hiiraan oo ka furmay Jowhar – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
DEG-DEG: Shirka Maamul Sameynta Shabeellaha Dhexe & Hiiraan oo ka furmay Jowhar
12th January 2016 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa si rasmi ah uga furmay shirka maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe waxaana furitaanka shirkaasi xarigga ka jaray Madaxweynaha Dowladda Federaalka Xasan Sheekh Maxamuud.
Munaasabadda furitaanka shirka waxaa ka soo qeyb galay madax, xildhibaano, ergooyin ka socda gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe iyo dadweyne fara badan.
Xafladda lagu furayay shirka waxaa ka hadlay Madaxweyne Xasan Sheekh oo ku booriyay ergooyinka shirka inay dedejiyaan maamulka labada gobol oo uu sheegay inay uga baxayaan baahiyaha nidaam ee labada gobol u qabaan hab maamulka federaaliga ah.
“Dowladda Federaalka waxay gacan ka geysaneysaa sidii loo dhameystiri lahaa maamulka gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe” ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh oo uga mahad celiyay qeybaha kala duwan ee bulshada labada gobol sida ay uga go’an tahay inay sameystaan maamul ay ku mideysan yihiin.
Madaxweyne Xasan oo gaaray Jowhar (Sawirro)